Ukuphupha ngeGeranie Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
IGeranium ibizwa ngokufanelekileyo ngokuba yi-pelargonium okanye i-pelargonium. Ekuqaleni ivela eMzantsi Afrika, apho kukho iintlobo ezingaphezu kwama-250 zezilwanyana. Ngenkulungwane ye-XNUMX, igeranium yangeniswa eYurophu, apho ngempazamo yabizwa ngokuba yigeranium. Igama elithi "geranium" lithathwe koku.
Njengomgaqo oqhelekileyo, igermany ziyaziwa ukuba ziqinile kwaye zineentyatyambo ezinde. Kuba bengadingi kukhathalelwa kwaye baqhakaza lonke ixesha lasehlotyeni, ezi cranebill ziphakathi kweebhalkhoni ezaziwayo kunye neentyatyambo zegadi. Banikezela ngemibala eyahlukeneyo xa isiza kwientyatyambo zabo-ungayifumana yonke into ukusuka emhlophe ukuya kupinki, bomvu okanye mfusa.
Ke ngoko, unale nto engqondweni, umbala weentyatyambo zamaphupha nawo kufuneka uthathelwe ingqalelo kumfanekiso wephupha legeranium. Kuba oku kunokubonelela ngeendlela ezinomdla ngakumbi zokutolika. Umzekelo, ukuba ubona igermany ebomvu ephupheni, ungafumana isibonakaliso somdla wakho wobomi.
1 Isimboli yephupha «geranium» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «geranium» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «geranium» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «geranium» - ukutolikwa ngokubanzi
IiGeranium njengophawu lwephupha zisetyenziselwa uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi njenge Bode kakuhle iqwalaselwe. Umzuzu wolonwabo kunye nokuphumla ulindele umphuphi. Ungakhangela phambili kumaxesha olonwabo, ngakumbi kusapho nasekhaya. Kwakhona, iigeraniums ezintsha nezintle ephupheni zizisa impilo kunye nempumelelo, ngelixa iintyatyambo ezibunjiweyo zegeranium kwelinye icala zizisa ukuphoxeka nokusilela.
Nabani na othenga isityalo segeranium kwivenkile yakhe ephupheni uhlala ebalinda Izinzuzo Nangona kunjalo, ulumke malunga nokuchitha ngokungxama kwemali.
Ukuba umphuphi umba umngxuma ngomhlakulo ngelixa elele ukuze atyale i-pelargonium, ufumana isilumkiso esikhulu sokungakhathali, esinokuba nefuthe elibi kubomi bosapho. Ukuqothulwa kwegeraniums ephupheni kubonisa umntu oleleyo ukuba uza kulonakalisa ulonwabo ngezenzo zakhe el mundo ukuvuka.
Ukuba umphuphi ufumana intyatyambo yegeranium ngelixa elele ngelixa esenza uvumo lothando, ngokuthetha ngokubanzi, umnqweno wakhe ongazalisekiswanga kufanelekile kuye. ukuqonda ukuba uqaphele. Lo mnqweno uza kuzalisekiswa kungekudala kwaye ziya kuthakazelelwa iinkxalabo zakho.
Ukuba ujonga ngobubele kwizityalo ze-cranesbill njenge-geranium ephupheni lakho, iya kukubonisa ukuba imbambano osandula ukubandakanyeka kuyo ayibi nzulu njengoko bekufanele ukuba njalo ekuqaleni.
Uphawu lwephupha «geranium» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika iphupha legeraniums ngendlela yokuphupha i Ihlabathi elinemvakalelo abanye abantu abaxakekileyo, nokuba abanamdla. Ulingisa inkxalabo yakho njengoko unokoyika aba bantu.
Ukuba umntu oleleyo ubona igermany emvuleni ephupheni lakhe, amathemba akhe kwaye Lindele zizalisekise ebomini bokuvuka. Zombini iinkalo zobungcali nezabucala ziyaqwalaselwa.
Ukongeza, imicimbi yothando iya kuphuhlisa ngokuqinisekileyo. Ukujonga ifoto ye-pelargonium kunokubonisa umbono onomdla weemvakalelo.
Kuthathelwa ingqalelo intyatyambo, uphawu lwephupha "igeranium" ikwaquka oku Umgaqo wobufazi. Ukuba iintyatyambo zegeranium zivulekile ephupheni, oku kubonisa, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, ukukhula kwangoko ebomini bokuvuka. Lowo uphuphayo akoyiki kolu phuculo lwesiqu sakhe, kodwa uvulelwe oko.
Uphawu lwephupha «geranium» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, ukufudumala kwentliziyo kwaye oku kuchazwe kwisimboli yephupha «geranium». uvelwano oko ukulala kuzisa abanye abantu kwihlabathi elivukayo.